टिकटकको ठाउँ लिदै ‘थोप्ला’ ! – Saurahaonline.com
टिकटकको ठाउँ लिदै ‘थोप्ला’ !
चितवन : चर्चित भिडियो शेयरिङ एप टिकटकको ठाउँ लिदै नेपालमा ‘थोप्ला'( Thopla) संचालनमा आउने भएको छ।
एलको(Yelko) कम्पनीले नेपालमा आफ्नै टिकटक अर्थात् ‘थोप्ला’ नामक भिडियो शेयरिङ एप संचालनमा ल्याउने भएको हो। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक उज्जवल खनालका अनुसार नव वर्ष २०७८ लाई लक्षित गरेर ‘थोप्ला’ सार्वजनिक गरिने योजना रहेको छ। यस एपमा १५ देखि १ मिनेट सम्मको भिडियो अपलोड गर्न मिल्ने छ। कम्पनीका अनुसार पर्योगकर्ताको डाटा सुरक्षा र पर्योगकर्तालाई सहजताका साथ् मनोरञ्जन प्रदान गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिइएको छ।
रजिस्टर गर्नको लागि:- www.thopla.com